रू. २८ करोड नाफामा रहेको विराटनगर जुट मिलको रू. ५ अर्बभन्दा बढी ऋण
मुलुककै पहिलो विराटनगर जुट मिलले कुनै समय वार्षिक २८ करोडसम्म नाफा कमाउँदै आएको थियो । २०४६ सालपछि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलका आप्mना मानिसको भर्तीकेन्द्र बनेपछि अहिले यो मिल बन्द छ । नाफा कमाउँदै आएको जुट मिलको नाममा अहिले रू. ५ अर्ब भन्दाबढी ऋणमा छ । मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्था र कामदार कर्मचारीको गरी मिलले रू. ५ अर्बभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ ।